people Nepal » आज राति दिल्ली राजस्थानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै , सन्दीप टिममा पर्ने सम्भावना ! आज राति दिल्ली राजस्थानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै , सन्दीप टिममा पर्ने सम्भावना ! – people Nepal
आज राति दिल्ली राजस्थानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै , सन्दीप टिममा पर्ने सम्भावना !
Posted on April 11, 2018 by Purna Nanda Joshi
दिल्ली डेयरडेभिल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा जितपुरस्थित सवाई मनसिंह रंगशालामा नेपाली समयअनुसार ८ बजेर १५ मिनेटमा सन्दीपको टिम दिल्लीले आज राति राजस्थान रोयल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । दुबै टिमले पहिलो खेलमा पराजयको शिकार बनेका छन् । आफ्नो पहिलो खेलमा किंग्स इलाभेन पञ्जाबसँग ६ विकेटले दिल्ली पराजित भएको थियो । यता, राजस्थान सनराइजर्स हैदराबादसँग ९ विकेटले पराजित भएको थियो ।
पहिलो खेलमा डेब्यु गर्न नसकेका नेपालका सन्दीप लामिछाने राजस्थानविरुद्धको खेलमा खेल्न पाउने केही झिनो सम्भावना रहेको छ । पहिलो खेलमा पञ्जाब विरुद्ध दिल्लीका कुनै पनि स्पिनरले राम्रो बलिङ गर्न सकेनन् ।
भेट्रान लेग स्पिनर अमित मिश्र पहिलो खेलमा महंगो सावित भए तर उनले एक विकेट पनि लिन सकेनन् । अमितले ४ ओभर बलिङ गर्दै ४६ रन खर्चेका थिए । पहिलो खेलमा फितलो बलिङ गरेका अमितको इकोनोमी ११.५० रहेको थियो । त्यसो त, विदेशी खेलाडीमा ट्रेन्ट बोल्ट, ड्यानियल क्रिस्टेयन र क्रिस मोरिसले पनि राम्रो बलिङ गर्न सकेका थिएनन् । यद्यपी ब्याटिङतर्फ मोरिसले १६ बलमा अविजित २७ रन बनाएका थिए । तर ओपनिङमा आएका विदेशी खेलाडी कोलिन मुनरो भने ४ रनमा नै आउट भएका थिए ।
पहिलो खेलमा दिल्लीका मुख्य खेलाडी ग्लेन म्याक्श्वेल थिएनन् । उनी अष्ट्रेलियन खेलाडी एरोन फिन्चको विवाहमा गएका कारण पहिलो खेलेनन् । आजको खेलमा भने उनीको उपस्थिति हुनेछ । दिल्लीका स्पिनरले किफायती बलिङ गर्न नसकेको अवस्थामा सन्दीपले खेल्ने सम्भावना रहेको छ । ग्लेन म्याक्श्वेल, क्रिस मोरिस, ड्यानियल क्रिस्टेयन, सन्दीप लामिछाने, जासन रोय, टे«न्ट बोल्ट, कोलिन मुनरो र लिआम प्लुंकेट गरी दिल्लीमा ८ जना विदेशी खेलाडी छन् । यी मध्ये ४ खेलाडीले आजको खेल खेल्न पाउनेछन् ।
यु–१९ विश्वकप ह्याट्रिक विकेट तथा आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु को प्लेयर अफ द सिरिज समेत भएका सन्दीप नेपालका प्रतिभाशाली खेलाडी हुन् । दिल्लीका कप्तान गौतम गम्भिर र प्रशिक्षक रिकी पोन्टिङको विश्वास जित्न सके सन्दीपले राजस्थान रोयल्स विरुद्धको खेल खेल्न पाउने छन् ।
सीप्यान क्रिकेट अवार्ड प्रदान गरिने, कुन खेलाडीले जित्लान अवार्ड ?